:::: Golaha Wasiirada Soomaaliya oo lagu dhawaaqi doono ::::
24ta Saacadood ee fooda nagu soo haysa ayaa lamagacaabayaa golaha Wasiirada Soomaaliya mise ku qanci doonaan Siyaasiyiinta aan ka mid noqon Xubnaha Baarlamaanka
Raysul wasaaraha Soomaaliya Prof Cali Maxamed Geedi ayaa waday maalmihii inaga tagay kulamo is daba jooga oo uu lalahaa Xubnaha Baarlamaanka Soomaliya, Siyaasiyiinta, Madaxwaynaha iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaliya.
Prof Cali Maxamed Geedi oo la soo baxay dhaqan aan Soomalida lagu aqoon iyo Siyaasiyiintii hore aya irid walba garaacay isagoo doowladiisa ka dhaadhicinay xubnaha kala duwan ee Soomaalida.
Prof Cali Maxamed Geedi waxa uu kulamadii ugu horeeyay la wadaagay Hogaamiyaasha Muqdisho Sida Cusmaan Xasan Cali Caato, Maxamed Qanyare Afrax, Al Xaaji Muuse Suudi Yalaxow, Cumar Finish Furux Bootaan Xaaraan Kunaax , Xussen Maxamed Faarax Caydiid iyo Hogaamiyaal kale oo iyagu awood badan kuleh Magaalada Muqdisho ee Caasimada ah.
Raysul wasaaraha Soomaliya Prof Cali Maxamed Geedi waxa uu ka dhaadhiciyay Xukuumadsiisa dhamaan Dadka Soomaliyeed ha yeeshee walwalka Prof Gedi hayaa waxa weeye sida dadka Soomaaliyeed dowladiisa ugu qancin lahaa maadaama Baarlamaanka Soomaliya meel mariyay qodob oranaya wasiirada waxaa laga qaadanayaa gudaha Xubnaha Baarlamaanka oo qura.
Waxaa jira aqoonyahano badan, Siyaasiyiin iyo waxgarad wax wayn ka tari kara Arimaha Murugsan ee Soomaliya balse aan iyagu nasiib u yeelan in ay ka mid noqdaan Baarlamaanka Soomaliya.
Hadaba saacadaha fooda nagu soo Haya waxaa la magacaabaya golaha Wasiirada wasiiradaa oo sida la shaaciyay ay ubadnaan Doonaan Hogaamiyaasha Soomalida ee Hubka haysta oo taas Madaxwaynaha Soomaliya mar uu booqanay Adis Ababa ayuu Saxaafada u sheegay.
Hadaba Madaxwaynaha Soomaliya Mudane Cabdulaahi Yusuf Axmed ayaa isagu sheegay xiligii la doortay in Soomaaliya uu ku hagayo wadada Nabada iyo Dimuquraadiyada wax wayna ka qaban doono mas uuliyada saaran oo ah in soomalidu ku diirsadaan.
Madaxwaynuhu waxa uu sheegay in uu Gudan doono Xilkiisa ama dhimandoono ama Xilka sida loogu doortay u wareejin doono.
Guud ahaan saadaasha ay ka bixinayaan dadku ayaa ah mid sareeysa oo niyad wanaaga balse aduunwaynaha ayaa amuurtan ku xiray in Soomalidu iyadu dhinaceeda kala Timaad is fahan si aduunku u caawiyo waxaana ilaa iyo hada muuqda in Soomaalidu aysan kala fogeen oo waxaan indhaheena ku Daawaneeynay Hogaamiyaashii hubka haystay oo iyagu leh waxaan taageersanahay Dowlada oo gacmaha is haysta balse la arki doonee qaabka ay niyadoodu noqoto markii Wasiirada lagu dhawaaqo iyo sida ay ugu qancaan xilalka loo magacaabi doono.
Walwalka ugu badan waxa uu ka imaanaya Siyaasiyiinta aan iyagu ku jirin Baarlamaanka Soomaaliya oo isha ka eegaya sida xaalku noqon doono waxaan iyagu baarlamaanka Soomaliya ka mid aheen Jan Maxamed Saciid Xirsi Morgan iyo Maxamed Cumar Xabeeb Maxameddheere oo Xubintiisii ku wareejiyay Prof Cali Maxamed Gedi.
Soomaaliya oo ka qayb geli doonta tartanka Bariga & Bartamaha Afrika [Faaqidaada Ciyaaraah ee Axadda]